ပွတ် glazed ကြွေကြွေပြားများ: သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
ပွတ် glazed ကြွေကြွေပြားများ
ကြွေ Tile ဆိုတာဘာလဲ။
ကြွေကြွေပြားများသည်ကြာရှည်ခံသည့်အထပ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သဘာဝရွှံ့အခြေပြုကြွေကြွေကြွေကြွေကြွေပြား. ဤအကြမ်းပြင်အမျိုးအစားများကိုအားလုံးကျော်တွေ့ရှိနိုင်သည် သူတို့အစွန်းရောက်ခံနိုင်ရည်ရှိနေသောကြောင့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ရာစုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည် မီးပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ခြင်း. သူတို့နှင့်ကိုက်ညီရန်အရောင်များနှင့်စတိုင်များကိုလာကြ၏ မည်သည့်အရသာသို့မဟုတ်စတိုင် preference ကို.
1) Glazed ကြွေအုပ်ထိန်း
Glazed ကြွေကြွေပြားများသည်အသုံးအများဆုံးကြွေထည်အမျိုးအစားဖြစ်သည်. Glazing သည်အခိုင်အမာသို့မဟုတ် glaze သည်များသောအားဖြင့်ပါ0င်သောကြွေထည်ပစ္စည်းများအတွက်ပါ0င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် vitrified ခဲဖန်ခွက်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောင်စုံမျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သောတစ်ခါတစ်ရံရောင်စုံအောက်ဆိုဒ်များ. ၎င်းသည်စကျင်ကျောက်မည်မျှပေါ် မူတည်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, စတစ်ကာ, glaze အားဖြင့်ဖုံးလွှမ်း.
Glazed ကြွေကြွေပြားများကိုအရောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်. သူတို့ကကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုဘဲနံရံများ, ကြမ်းပြင်များသို့မဟုတ်အခြားပြားချပ်ချပ်များပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည် သူတို့ဟာအခမ်းအနားလိုပဲသူတို့ဟာအလွန်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိသည်. တစ်ခုတည်းသောကျဆင်းမှု ကြွေကြွေပြားများသည်အပူနှင့်အအေးမိခြင်းအပြောင်းအလဲများကိုအလွန်အမင်းပြောင်းလဲရန်အကင်းပါးပါးဖြစ်သည်။ အရာသူတို့ကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူ crack ဖို့သူတို့ကိုစေနိုင်ပါတယ်.
အမည်အကြံပြုသည်နှင့်အမျှဤအမျိုးအစား ကြွေကြွေပြားကို glazed မဟုတ်ပါဘူး. မဟုတ်ရင်းနှီးသောကြွေပြားများကိုအများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည် သူတို့ကရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်အောင်လုပ်နိုင်သောကြောင့်အပြင်ဘက်ရည်ရွယ်ချက်များ အပူသို့မဟုတ်အအေးမိခြင်းနှင့်အအေးမိခြင်းအပြင်ဆိုးရွားခြင်းမရှိဘဲပြင်းထန်သောပြောင်းလဲမှုများကိုမပျက်စီးစေဘဲ. သူတို့ဟာအလွယ်တကူမဖုံးကွယ်ထားတဲ့မညီမျှတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိတယ်။ သူတို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်.
ပထမ ဦး စွာကြွေကြွေပြားများပြုလုပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုမည့်ကုန်ကြမ်းများကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည် အဖြူရောင်အရောင်များကိုသင်ရလိုပါကအဖြူ, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ကဲ့သို့သောရွှံ့အရောအနှောနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောအရောင်များနှင့်ကွဲပြားသောအရောင်များပါဝင်သည်. ရွှံ့စေးများသည်ရေနှင့်ရော။ ခြောက်သွေ့သွားပြီးရွှံ့စေးခြောက်သွေ့သောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်.
ရွှံ့စေးခြောက်သွေ့ပြီးနောက်၎င်းသည်မတူညီသောခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်ရောနှောနေသည် အရောင်အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်အရောင်များ. ကြွေကြွေပြားများအတွက်အရောအနှော အကုန်အကျမရှိတဲ့သဘာဝပစ္စည်းတွေ, ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများအတွက်သူတို့ကိုမသင့်တော်သောဓာတုပစ္စည်းများပိုမိုများပြားလာစေနိုင်သည်.
ယခုတွင်ရွှံ့စေးအရောင်များကိုသူတို့အလိုရှိသည့်စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသည် 1250 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်2နာရီခန့်လျှပ်စစ်မီးဖို၌ဖုတ်ခြင်းမပြုမီသေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ပါ. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်ရွှံ့စေးသည်အခြားဖြစ်စဉ်များတွင်ပုံဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုမီရွှံ့စေးသည် 800-900 ဒီဂရီအထိအအေးခံရန်ရှိသည်..
ထို့နောက်ဖုတ်ထားသောရွှံ့စေးများကိုသေးငယ်သောအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးရေနှင့်ရောစပ်ထားသည် ပစ္စည်းဥစ္စာကဲ့သို့အထူမုန့်စိမ်းဖန်တီးရန်. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို "slabbing" ဟုခေါ်သည်။ အရောအနှောကိုခြောက်သွေ့အောင်ခွင့်မပြုမီကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံ၌လှိမ့်လိမ့်မည် ရှစ်နာရီလောက်မှာခက်ခဲလာနိုင်တယ်, ဆိုလိုတာက, ကြွေပြားများကိုဤအချက်မှာပြီးဆုံးသည်.
သင်မည်သည့်ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ပုံစံများကိုမဆိုထည့်သွင်းလိုလျှင် ကြွေကြွေပြားများသို့၎င်း, သူတို့အားမပြတ်မီအဆုံးတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည် 24 နာရီခန့်လောက်ကြာပြီးနောက်နောက်တစ်ခါထပ်အအေးခံလိုက်ရတယ် သို့မဟုတ်လိုအပ်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်. အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအားလုံးသည်အထိဤကဲ့သို့သောအပေါ်သို့သွားသည် ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံကိုလုပ်နေကြသည်.
2) အခြားကြွေပြားအမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲကြွေများသည်အုတ်မြစ်သည်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်အကြှနျုပျ၏ခြစ်ရာသို့မဟုတ် chipping ကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
3) ၎င်းသည်ထူးခြားသောအစွန်းအထင်းဂုဏ်သတ္တိများသာမကမှိုနှင့်အနာကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်. * ကြွေကြွေပြားများသည်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သန့်ရှင်းလွယ်ကူစေရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်.
4) မှို, အနာသို့မဟုတ်ဘက်တီးရီးယားပိုးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကြီးထွားလာခြင်းမှို,.
2) မတော်တဆကျဆင်းသွားပါကကြွေကြွေပြားများသည်အလွယ်တကူချိုးဖောက်နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်ကလေးငယ်များနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိသည့်နေရာများနှင့်အတူ areas ရိယာများအတွက်မသင့်လျော်ပါ.
3) ကြွေထည်သည်အခြား0ါးအမျိုးအစားများထက်ပိုမိုစျေးကြီးသည်.
ကြွေကြွေပြားများသည်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်. ကြွေထည်သည်ခိုင်ခံ့ပြီးကြာရှည်ခံသည်။. ၎င်းသည် hypoallergenic အဓိပ္ပာယ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြွေပြားကိုလုံခြုံစွာထားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ပစ္စည်းများမှဓာတ်မတည့်မှုကြုံတွေ့. ရရှိနိုင်သည့်ကြွေကြွေပြားအမျိုးအစားများစွာရှိသည်. ဒီမှာသူတို့အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအသုံးပြုမှုအချို့ကိုကြည့်ပါ
သင်၏မီးဖိုချောင်သုံး tile သည်အသစ်တစ်ခုကိုအသစ်တစ်ခုလိုပါကသင်စဉ်းစားလိုပေမည် ကြွေပြားကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်နံရံ cladding ကို install လုပ်. ကြွေမီးဖိုချောင်ကြွေပြားများသည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည် ကြွေထည်နံရံနှင့်ကြမ်းခင်းကြွေပြားများနှင့်ကြမ်းခင်းကြွေပြားများကမီးဖိုချောင်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော ချက်ပြုတ်နေတဲ့အိမ်မှာလုပ်တယ်.
စဉ်းစားရမည့်အရာ : -
အောက်ပါအပါအ0င်ကြွေကြွေများကိုမထည့်သွင်းမီသင်စဉ်းစားလိုသည့်အရာများစွာရှိသည်
1) ကြာရှည်ခံမှု - ကြွေထည်သည်ကြာရှည်ခံသောကြမ်းပြင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူခြစ်ရာမထားပါ။ ၎င်းသည်မပျက်စီးဘဲလေးလံသောခြေလျင်အသွားအလာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
2) သန့်ရှင်းမှု - ကြွေထည် - ဆပ်ပြာ, ရေနှင့်အထည်နှင့်အတူသန့်ရှင်းရေးလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအနံ့များကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ,.
3) စျေးနှုန်း - ကြွေထည်များသည်သင်လိုချင်သောအပြီးသတ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။ အချို့သောကြွေကြွေပြားများသည်အလွန်စျေးကြီးသော်လည်းအခြားသူများကပိုမိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လာနိုင်သည်.
4. ထိန်းသိမ်းခြင်း - ကြွေထည်များသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်, ဆပ်ပြာ, ရေနှင့်အထည်များနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သည်။.
လူအများစုကကြွေထည်ရေချိုးခန်း tile သည်စိုစွတ်သောနှင့်စိုထိုင်းသောအခြေအနေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်လူအများစုသည်ကြွေထည်များကိုရေချိုးခန်းထဲတွင်အသုံးပြုလိုကြသည်။ အချို့ကအကောင်းဆုံးရေချိုးခန်းကြမ်းခင်းရွေးချယ်မှုသည်သဘာဝကျောက်တုံးများသို့မဟုတ်ကြွေထည်ကျွေးမောင်းဖြစ်သင့်ကြောင်းအငြင်းပွားမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။.
1) ကြွေထည်ရေချိုးခန်းကြွေပြားများသည်ပွတ်တိုက်မှုနိမ့်ကျသည်။. အကယ်. ဤသည်မနှစ်သက်ပါကကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်အစားထိုးနိုင်သည်.
3) ၎င်းသည်ကြာရှည်ခံမှုကြောင့်ကလေးများနှင့်အတူရေချိုးခန်းများအတွက်ရေချိုးခန်းများအတွက်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်. ရေချိုးခန်းကြွေပြားသည်မှိုနှင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးများကြီးထွားမှုကိုတွန်းလှန်ကြသဖြင့်၎င်းတို့သည်အခြားကြမ်းခင်းပစ္စည်းများထက်ပိုမိုသန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ကြသည်. ၎င်းသည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းထားသည်.
ကြွေထည်များသည်၎င်းတို့၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျခြင်းကြောင့် living ည့်ခန်းများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ ကြွေထည်များသည်မည်သည့်အိမ်အလှဆင်ပုံစံသို့မဟုတ်အရောင်အစီအစဉ်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အရောင်များ, သို့သော်မီးဖိုချောင်များအတွက်ကြွေထည်များသည်မီးဖိုချောင်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။.
ကြွေထည်များသည်သူတို့၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျခြင်းကြောင့် living ည့်ခန်းများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်. ကြွေထည်များသည်မည်သည့်အိမ်အလှဆင်ပုံစံသို့မဟုတ်အရောင်အစီအစဉ်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အရောင်များ,. သို့သော်မီးဖိုချောင်များအတွက်ကြွေထည်များသည်မီးဖိုချောင်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။.
အိမ်ပိုင်ရှင်အများစုသည်ကြာရှည်ခံနိုင်မှုနှင့်လှပသောဒီဇိုင်းများကြောင့်သူတို့၏ကြွေကြွေများကိုစင်္ကြံများတွင်အသုံးပြုကြသည်. ၎င်းသည်အလင်းရောင်ရှိသောအရောင်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်,'t ကိုအောက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုမှမြင်နိုင်သည်နှင့်အမျှဖုန်ကိုအလွယ်တကူပြသပါ. သင်၏စင်္ကြံကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်း၏အသန့်ရှင်းဆုံးကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်သင်၏စင်္ကြံကြွေပြားများ၏မျက်နှာပြင်မှဖုန်များကိုဖယ်ရှားပေးရန်နှင့်သူတို့ကိုလှောင်ပြောင်စောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်။
မင်းရဲ့စင်္ကြံတွေအတွက်ကြမ်းခင်းပစ္စည်းတွေကိုသင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကစားလာတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်. စဉ်းစားရန်အရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုမှာကြာရှည်ခံမှုဖြစ်သည်. စင်္ကြံတစ်ခုဖြင့်သင်အိမ်တစ်အိမ်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေသည့်လူအားလုံးနှင့်အတူနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာသည့်အရာအားလုံးကိုနေ့စဉ်ရပ်တည်မည့်အရာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကော်ဇောများသည်ကြွေပြားများသို့မဟုတ်သစ်မာကြမ်းခင်းများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ0တ်ဆင်နိုင်သည်,.
စဉ်းစားရမည့်နောက်တစ်ခုမှာသင်၏စင်္ကြံကြမ်းခင်း၏အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်. အချို့လူများကပျော့ပြောင်းပြီးပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ပိုမိုပါးလွှာသောခံစားမှုပိုများလာသည်။ tile floors များသည်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများနှင့်အရောင်များစွာဖြင့်လာကြသောကြောင့်သင်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်.
စင်္ကြံရှိကြွေကြွေပြားများနှင့် ပတ်သက်. အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ကူရှင်များမဟုတ်ပါ. ၎င်းသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ခြေထောက်များသို့မဟုတ်ပူးတွဲပြ problems နာများကိုလက်တွဲပြ problems နာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်, သင်ကြွေပြားများကိုဖြတ်တောက်ရန်နှင့်အဆင့်ကိုရရန်ခွန်အားများစွာလိုအပ်နေသည်ကတည်းကတပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲသည်.
ကြွေကြွေပြားများသည်အပြင်ပန်း application များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ကြွေကြွေပြားများကို Patios, လသာဆောင်များနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောရေစုပ်ယူမှုနှုန်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်.
ကြွေကြွေများသည်အပြင်ပန်းအပလီကေးရှင်းများတွင်တာ0န်မရှိပါ ချစ်ပ်, စုပ်ယူပြီးအက်ကွဲဖြစ်လာသည်. ကြွေကြွေပြားမျက်နှာပြင်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှခြစ်ရာများကိုလည်းကျရောက်နေပြီဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ဆေးသုတ်ခြင်းကိုအခွံခွာစေမည့်ပရိဘောဂ.သူတို့ကသူတို့အပေါ်မှာအေးခဲရင်ရေပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်တယ်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကရေခဲပြားများကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမိုးသည်းထန်စွာဖိအားပေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
အနက်ရောင်ကြွေပြားများသည်လှပသော, ခေတ်မီဆန်းပြားသောအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ၎င်းတို့ကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားအရောင်များဖြင့်ပိုမိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်. သို့သော်အနက်ရောင်ကြွေကြွေသည်တကယ့်မှောင်မိုက်နေပြီးမီးဖိုချောင်တွင်သုံးပါကသင်၏ကောင်တာများ၌သင်၏တန်ပြန်များရှိပါစေ.
အဖြူရောင်ကြွေထည်များသည်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ဤဒေသများအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်အရောင်အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်. သင့်အိမ်တွင်နွေးထွေးမှုနှင့်အေးမြမှုများကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်. အဖြူရောင်ကြွေပြားများသည်ပန်းချီကားများသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲကရိယာများသို့မဟုတ် fixture များကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူစေသည်.
ကြွေကြသည့်ကြွေထည်သည်မီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းတွင်သမုဒ္ဒရာမှုတ်သွင်းခံကြည့်ရှုခြင်းကိုဖန်တီးလိုသူများအတွက်အလွန်ရွေးချယ်စရာကောင်းပြီးသူတို့၏ backsplash တွင်နေရာအလုံအလောက်ရှိသည်. ၎င်းကိုကြမ်းခင်း, တန်ဆာပလာများသို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဗီရိုများပါသောပရိဘောဂကဲ့သို့သောအခြားဒေသများတွင်အရောင်အသွေးအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်. သငျသညျအရောင်အရောင်များကိုအရောင်များကိုအအေးဖို့ color scheme ကိုစောင့်ရှောက်အဖြစ်, အပြာရောင်ကြွေကြောင်သည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
အစိမ်းရောင်ကြွေပြားများကိုပုံမှန်အားဖြင့် earthy ခံစားမှုပိုများစေသောမီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းများတွင်အသုံးပြုသည်. သူတို့ကိုလည်းအပြင်ပန်းနံရံများသို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်တွင်တွေ့နိုင်သည်. အကယ်. သင်သည်သင်၏ပုံမှန်အဖြူရောင်ကြွေထည်စိမ်းလန်းသောကြွေထည်များနှင့်ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကရှာဖွေသင့်သည်.
ခရမ်းရောင်ကြွေကြွေပြားများသည်အခြားအရောင်တစ်ခုဖြစ်သောအခြားအရောင်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်နွေးထွေး။ အေးမြသောဟန်ချက်ညီညွတ်မှုကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်. သင်၏အခန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကြည့်ရှုရန်ခရမ်းရောင်, အညိုရောင်,.
Red Comcelain tile ကိုနံရံများ,. ၎င်းသည်မြေကြီးကိုခံစားလိုစိတ်ရှိလိုသူများအတွက်ရွေးချယ်မှုကောင်းများနှင့်အစိမ်းရောင်ကြွေပြားများအသုံးမပြုဘဲမီးဖိုချောင်တွင်အပြောင်းအလဲအချို့ကိုလိုချင်ကြသည်.
ပန်းရောင်ကြွေကြွေသည်သင်၏နံရံပေါ်ရှိအဓိကအရောင်အဖြစ် အသုံးပြု. သင်၏အိမ်ကိုတ္နှင့်ပျော်စရာကြည့်ရှုရန်အနီရောင်, အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်ချယ်လ်ဆီးအသင်းများကဲ့သို့အခြားအရောင်များဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်. အခန်းတစ်ခန်းတွင်အရောင်များလွန်းခြင်းမရှိဘဲအမျိုးစုံခံစားမှုကိုဖန်တီးလိုသူများအတွက်လည်းစုံလင်သည်.
ကြွေထည်ကြွေပိုးများသည်သင်0ယ်ယူနိုင်သည့်ကြွေကုန်သည်များဖြစ်သည်. သူတို့သည်သင်၏အိမ်တွင်မည်သည့်အခန်းမဆိုအကြီးအကောင်းမွန်သည်, သူတို့မတူညီသောစတိုင်များနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်. သူတို့၏နေအိမ်များကိုထိန်းသိမ်းလိုသူများသည်မကြာခဏဆိုသလို beige ကိုရွေးချယ်လေ့ရှိသည်,. အကယ်. သင်သည်အလင်းနှင့်လေယာဉ်များကိုခံစားရန်သို့မဟုတ်အချို့သောကမ်းခြေတွင်အားလပ်ရက်များ၌ခံစားချက်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းခံရခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားနေပါကအခန်းတစ်ခန်းတွင်အသံထွက်နိုင်သောအရောင်အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်.
အဝါရောင်ကြွေထည်သည်သူတို့၏အိမ်ကိုနေရောင်ခြည်ဒဏ်ခတ်မှုပရဒိသုကဲ့သို့ခံစားစေလိုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ဒီအရောင်ကိုမီးဖိုချောင်တွေဒါမှမဟုတ်သဘာဝကျနေတဲ့အခြားနေရာတွေမှာအကောင်းဆုံးသုံးတယ်, ဒါကြောင့်နံရံတွေကနေရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးသင့်အိမ်ရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့နေရာကိုတောက်ပစေနိုင်တယ်. တချို့လူတွေကအဝါရောင်လိုပဲ,.
သင်တောက်ပသောအဆုံးကိုကြည့်ပါ ခေျာမွှတ်တောက်ပသော အကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်ပါတယ်. တောက်ပသောကြွေပြားများသည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအခြားအချောများကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်.
ခဲွ့ DSCOR မဆိုစတိုင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအရည်အသွေးမြင့်, တောက်ပနေသော tile အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤကြွေပြားအမျိုးအစားများကိုအခြားဗားရှင်းများထက်အရောင်တောက်ပကြောင်းလူသိများသည်, ၎င်းတို့သည်ထွက်ပေါ်လာသောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်.
လူအချို့ကဤ Matte အရောင်များသည်မည်သည့်အရာအမျိုးအစားကိုမဆိုကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဟုထင်မြင်ကြပေမည်, သို့သော်၎င်းသည်မမှန်ပါ. Matte Tiles များသည်မည်သည့်အိမ်တွင်မဆိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်,.
Matte ကြွေကြွေများကိုရရှိနိုင်သည့်အရောင်များစွာရှိသည်။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးအရောင်အချို့သည်အနီရောင်,. ဤကြွေပြားအမျိုးအစားများအတွက်စျေးဝယ်သည့်အခါမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သောတောက်ပသောအရောင်သို့မဟုတ် Matte ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောအချောများရှိသည်. Matte ကြွေအုပ်ထိန်းသူများသည်ခေတ်မီသောခံစားမှုကိုလိုချင်သူများအတွက်အဆင်ပြေပြီးဖိတ်ကြားခြင်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်း.
ကြွေပြား၏ဤအမျိုးအစားအတွက်ဆိုးကျိုးများမှာ၎င်းသည်အဓိကကြမ်းခင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်အလွန်အမင်းကတ်ခြစ်ခြင်းများကိုအလွယ်တကူပြသနိုင်သည့်အတွက်သင့်အားအလွယ်တကူအလွယ်တကူအလွယ်တကူအလွယ်တကူအလွယ်တကူတွေ့နိုင်သည်။. ဤ Matte အရောင်များသည်အခြားဗားရှင်းများထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသည်.
Satin Charcelain Tiles သည်စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အဆက်မပြတ်နှစ်မျိုးလုံးနှင့်ကြော့နှစ်မျိုးလုံးကိုကြည့်သည်. ၎င်းတို့သည်အလယ်ခေတ်ကာလမှစပြီးသူတို့ကကြမ်းပြင်များနှင့်နံရံများပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်။. ဤရွေ့ကားအလွန်စွယ်စုံနှင့်မီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းများတွင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကအိပ်ခန်းအဖြစ်အိပ်ခန်းများအပါအဝင်အခြားလူနေမှုနေရာများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. Satin Charcelain tile ကိုအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိလား,.
သငျသညျသဘာဝနှင့်မြေ teary ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Satin ကြွေကြွေသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. Finish သည်သင်၏အိမ်သို့အလင်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည့်အနည်းငယ်သက်သာသော်လည်းအခြားအချောများများကဲ့သို့အလွန်တောက်ပသောသို့မဟုတ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. Satin Tiles များသည်ကြာရှည်ခံပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်.
သစ်သားကြွေကြွေပြားများသည်ခဏပတ်ပတ်လည်ရှိကြသည်. ၎င်းတို့သည်စစ်မှန်သောသစ်သားနှင့်သဘာဝရွှံ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမီးဖို၌ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်သဘာဝရွှံ့များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ရလဒ်သည်ကျောက်တုံး၏အသွင်အပြင်နှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်း၏မာကျောမှုနှင့်အတူ tile တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ဘာတွေသုံးတာလဲ, သူတို့ကကြမ်းခင်းတွေအတွက်သင့်တော်မလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။
သစ်သားကြွေကြွေပြားများသည်မီးဖိုချောင်များ၌လူကြိုက်များသည်. သူတို့ကကြီးစွာသော backsplash လုပ်သို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်. သစ်သားအစေ့ပုံစံကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည် tile တစ်ခုစီ၏ထူးခြားမှုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ များသောအားဖြင့်ဤကြွေပြားများကို herringbone ပုံစံဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးသူတို့စိတ်ကူးကြည့်ရှုသည်.
သစ်သားကြွေအုပ်ထိန်းများကိုလည်းနံရံပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သင်၏ကြမ်းပြင်တွင်သင်သုံးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ဒီကြွေပြားတွေဟာရေချိုးခန်းတွေအတွက်ရေစိုခံတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနဲ့ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းတွေပါတဲ့ရေချိုးခန်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
အကယ်. သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်သံချေးတက်နိုင်သော Vibe ကိုလိုချင်ပါကသစ်သားကြွေကြောင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. Finish သည်သစ်သားမှထွင်းထုထားပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်များစွာအပန်းဖြေရန်ရှာဖွေနေသည့်သဘောသဘာဝနှင့်အတူတစ်ခုတွင်ရှိနေခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်. သစ်သားကြွေပြားများသည်အလွန်ထူးခြားသည်, ၎င်းသည်၎င်းတို့အားအိမ်နီးချင်းများထံမှထွက်ပေါ်နေသည်ကိုစိတ်ထဲမထားသည့်ဖောက်သည်များအတွက်အလွန်ထူးခြားသည်.
Bookmatch ကြွေကြွေပြားများသည်တစ် ဦး ချင်းစီကြွေပြားနှစ်မျိုးနှင့်တူသော tile ကိုပြုလုပ်ထားသော tile တစ်ခုဖြစ်သည်. တစ်ဖက်တွင်တစ်ဖက်တွင်အရောင်နှင့်ပုံစံရှိလိမ့်မည်။. အဆုံးရလဒ်သည်ကြမ်းခင်းသို့မဟုတ်နံရံအဖုံးများကဲ့သို့ပိုမိုကြီးမားသောစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသောအခါအဘယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပေးသည်. ဤအမျိုးအစားအမျိုးအစား၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနည်းပါးခြင်းနှင့်ပိုမိုသောစွယ်စုံသောဒီဇိုင်းများကိုပါ0င်သည်။.
Bookmatch သည်သဘာဝကျောက်တုံးများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောအခြားကျောက်တုံးများနှင့်ဆန့်ကျင်သောအခြားကျောက်တုံးများနှင့်ဆန့်ကျင်သောအခြားကျောက်တုံးများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်. အရောင်များနှင့်အချောများသည်အလွန်စွယ်စုံဖြစ်သည်. တစ်စတုရန်းတစ်ခုကိုရှေ့ဘက်တွင်အရောင်တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်ကျောဘက်ခြမ်းတွင်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဆိုပါစို့.
သတ္တုယခုအချိန်တွင်စျေးကွက်တွင်ဖမ်းမိသောလမ်းကြောင်းသစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Metallic ကြွေအုပ်ကြောင်များသည်အချိန်အတန်ကြာပတ်0န်းကျင်ရှိခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းတို့အားကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည့်အချိန်အထိမည်သည့်အခါကမှမတတ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။.
Metallic ကြွေပြားများသည်ရွှေသို့မဟုတ်ငွေကိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောတောက်ပမှုနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။. ဤသတ္တုများသည်အရောင်များစွာဖြင့်လာသည်,.
သစ်သားပန်းပေြာက် ဗေဒဒီဇိုင်းနှင့်အတူကြာရှည်စွာကြမ်းပြင် option ကိုဖြစ်ကြသည်. ကြွေပြားများသည်သင်၏အိမ်၏မည်သည့်အခန်းသို့မဆိုအတိုးနှင့်ဇာတ်ကောင်ကိုထည့်သွင်းထားသောမျက်နှာပြင်သို့ထွင်းထားသောပုံစံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ထွင်းထုထားသည့်အုတ်သီးကိုမုန့်, ​​အညိုရောင်နှင့်အညိုရောင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားရွေးချယ်မှုငါးခုအပါအ0င်အရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နေရာတိုင်းအတွက်စတိုင်ရှိသည်.
အကယ်. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွေငွေသားများနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက စာရင်းစျေးနှုန်း, နမူနာ, စသည်တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရွေးချယ်စရာများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.